बिनोद रानाभाट सहयोग अभियानले उब्जाएका प्रस्न? | Pardehshilife
सुलभ पोखरेल- यतिबेला देश तथा बिदेशमा बिनोद रानाभाट सहयोग अभियान सक्रिय भएर लागीरहेका छ। भारतीय नागरिक हत्या अभियोगमा करिब ३ बर्ष देखि कतारमा जेल जीवन बिताइरहेका बिनोद लाई नेपाल फर्काउन देश तथा बिदेश बाट आर्थिक संकलन गरिएको छ। कतारको उच्च अदालतले २ लाख ६० हजार कतारी रियल ब्लडमनी स्वरुप भारतीय नागरिकका परिवारलाई दिनु पर्ने फैसला गरेको छ । सो रकम संकलन भै सकेको अभियान्ता हरुले बताएका छन । तर पनि यो अभियानले अझै केही प्रश्न जन्माएको छ।
(१) बिनोद हत्यारा नै हुन त?
नेपाली दूतावासले जनाए अनुसार बिनोदले स्वयं हत्या नगरेको अरुको कुटाइबाट घाइते भएको भारतीय नागरिकलाई बिनोदले अस्पताल लैजादा मरेको भनिएको छ । यदि बिनोदले नै मारेको भए इस्लामीक कडा कानुनले फाँसी दिन सक्ने थियो तर त्यहाको अदालतले फासीको निर्णय गरेको छैन । त्यसबाट के बुझिन्छ भने बिनोदले नै हत्या गरेको भए पनि केही न केही दोश भारतीय नगरिकको छ भन्ने देखिन्छ। फल स्वरुप ब्लडमनी को फैसला आएको हुन सक्छ।
(२) तीन बर्ष देखि बिनोदको बारेमा चासो थिएन त?
अहिले आर्थिक अभियानमा जुटेका केही ब्याक्तीहरु आगाडी देखिएर पैसा बोक्दै समाचार बनाएको देखिन्छ तर तीन बर्ष देखि बिनोदको बारेमा चासो राख्दै हरेक अदालती प्रक्रियाको फैसलालाई मनन गर्दै हल गर्न पहल गर्ने र भारतीय नागरिकको परिवार सह भेट गर्दै सहजीकरण गर्ने चितवन यूवा समुहका साथिहरुको कामलाइ ओझेल पार्दै गइयो । अहोरात्र खटिने हरु सग सहयात्रा गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता नेपालमा बनेको समिती र अभियान्ता हरुले हेक्का राखेनन। अझै धेरै प्रक्रिया हरु चाल्दै जानू पर्ने हुदा सहकार्यमा जोड दिनु पर्ने देखियो।
(३) पैसा तिरेर बिनोद नेपाल फर्किन पाउँछन् त?
अदालतले फैसला गरेको भारतीय नागरिकको परिवारलाई तिर्नु पर्ने ब्लडमनी २ लाख ६० हजार तिर्दैमा बिनोद नेपाल फर्कने होइनन । त्यो रकम भारतीय नागरिकको परिवाले स्वीकार गरेको खण्डमा मात्र नेपाल फर्काउने प्रक्रिया गर्न सकिने बिनोद रानाभाट सहयोग समितिका संयोजक सागर नेपालले बताउनु भयो। बिनोद पुर्पक्षको लागि जेल गए देखि प्रत्येक्ष रुपमा हेर्दै आउनु भएका चितवन युवा समूह अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति नेपालका सल्लाहकार सागर नेपालले दूतावासको सहयोगमा भारतमा नै गएर मृतकका परिवार सग छलफल गरिरहनु भएको छ। तर पनि कुनै निर्णयमा पुग्न नसकिएको बताउनु भएको छ। २० अगस्टमा मृतकका परिवार लाई कतार बोलाएर छलफल गर्ने र ३० अक्टोबरमा हुने फैसला पछि मात्रै बिनोदलाइ नेपाल फर्काउन सकिने वा नसकिने जानकारी हुने बताउनु भएको छ।
(४) पैसा कति जम्मा भयो त?
सागर नेपालको संयोजकत्वमा कतारमा बनेको समितिले संसारभरी रकम संकलन अभियान चलाउने निर्णय गर्यो। नेपालमा कृष्ण रानाभाटको संयोजकत्वमा आर्थिक संकलन समिति बन्यो । देश बिदेशमा जम्मा भएको रकम नेपालको समितिमा संकलन गर्ने निर्णय भयो । र सोही अनुसार रकम आउने क्रम जारी भयो र हाललाइ आबस्यक रकम जुटि सकेको र अभियान रोक्न भनिएको छ। चितवन यूवा समूह अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति का प्रवास संयोजक समीर केसि ले अभियान बन्द गर्न लगाउने र उठेको रकम सामाजिक सन्जालमा केही समय नहाल्न आग्रह गर्नु भएको छ। नेपालीले संकल्न गरेको रकम भारतीय को परिवार सम्म पुग्ने र रकम बढी माग्न सक्ने वा अन्य डिमाण्ड बढाउन सक्ने हुदा केही समय सामाजिक सन्जालमा पैसा बोक्दै फोटो खिच्ने काम नगर्न केसि को आग्रह छ। बिदेशी भूमिमा चन्दा संकलन गर्नु गैर कानुनी भएकोले संकलित रकम कतैबाट अबैधानिक हो भनी मुद्दा परेमा अभियान्ता हरुलाइ असहज पर्ने अभियान्ता नवीन किशोर घिमिरेले बताउनु भयो।
(५) बिनोदलाइ बचाउन पर्ने हो त?
आर्थिक संकलन को समयमा बिनोद बचाउ अभियान भनेर प्रचार गरियो । र फाँसी बाट जोगाउन भन्दै रकम जुटाइयो। तर अदालतले सुनाएको फैसलामा फासिको फैसला नभएको सागर नेपालको भनाइ छ। हामिले बिनोदलाइ बचाउन पैसा संकलन गरेको होइन बिनोदको परिवारलाई बिनोद जिम्मा लगाउन र मृतक भारतियको परिवारलाइ आर्थिक टेवा दिन अदालतले तोकेको रकन बुझाउन सबै नेपाली मिलेर संकलन गरिएको हो र बिनोदको परिवारले त्यो ठुलो रकम एक्लै दिन नसकेर सहयोग गरिएको अभियान्ता रामहरि गैरेको भनाइ छ।
(६) रकम संकलन गर्नु पर्ने यो अन्तिम पटक हो त?
बिनोद जस्तै १७ जना नेपाली कतारको जेलमा एस्तै केशमा रहेको र सयौको संख्यामा बिदेशी जेलमा रहेको नवीन घिमिरेले बताउनु भयो । सागर नेपालका अनुसार डोल्मा शेर्पा बाट रकम संकलन सुरु गरेर नेपालिलाइ नेपाल फर्काइएको धेरै पटक भै सक्यो र एस्तो अबस्था फेरि फेरि पनि आउन सक्छ तेसैले आगामी दिनमा गर्नु पर्ने संकलन लाई मनन गर्दै पार्दशी बनाउनु पर्ने ठहर छ। धेरै नेपाली ब्लडमनी तिरेर स्वदेश फर्किसकेका र कतिपय फर्कने तयारीमा रहेका हरुको ब्लडमनी संकलन गरिसकेपछी पारदर्शीतामा अन्योलता आउने गरेको चितवन यूवा समूह अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिका अध्यक्ष मुक्ति प्रसाद अधिकारीको भनाइ छ । हामिले धेरै पटक रकम जम्मा गर्नु पर्ने र बिश्वासनियताका लागि पारदर्शी बनेर रकम संकलन गर्न सके मात्र अर्को ब्याक्तीलाई चाहिले रकम जम्मा गर्न सहज हुने अधिकारी को भनाइ छ। बिनोदको नाममा जम्मा भएको रकम पारदर्शी बनाउन नेपालको मुल समितिले जिम्मा लिनु पर्नेमा केही ब्याक्ती हाबी भएर प्रचारमुखी देखिएको र सस्थालाइ बेवास्ता गरेकोमा दुखेसो छ अधिकारीको । अरु एस्ता अभियोगका ब्याक्तीलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने काम गर्न नहुने वहाको बुझाइ छ ।
देश तथा बिदेशमा रहेका नेपालीहरुको अथक प्रयासले बिनोद रानाभाट सहयोग अभियानमा चाहिने रकम जम्मा भएको जानकारी आए सगै केही प्रश्न जन्मेपनी त्यसलाई सामाधानको बाटोमा जानू पर्छ । चितवन यूवा समूह कतारले खेलेको भूमिका अतुलनीय छ।सागर नेपाल र समीर केसिको समन्वयकारी भूमिका खेल्न आझै बाकी देखिन्छ। आर्थिक संकलनमा महत्त्वपूर्ण रुपमा लाग्नुहुने रामहरि गैरे, ज्वाला संग्रौला , इशा गुरुङ , प्रशुराम घिमिरे , बेदप्रसाद पौडेल, सरिस्मा बराल , शिशिर भन्डारी, अर्जुन भुसाल, जसु पुन लिलाकान्त महतो लगाएत कृष्ण रानाभाटको नेतृत्वमा रहेको नेपालको समिति को मुख्य योगदान छ। यस्ता अभियानहरु फ़ेरि पनि चाल्नु पर्ने हुदा जति रकम बच्दछ सो रकम अर्को ब्यक्तिलाई जोगाउन काम लागोस भन्ने हेक्का रानाभाट परिवारले राख्नु पर्दछ। अभियान्ता हरुलाई थप हौसला मिलोस बिनोद छिटै घर फर्किन पाउन अनि भारतिय मृतक नागरिकका परिवारले केही राहत महसुस गर्न सकुन।
कोरिया मा “वीर बिक्रम २” को सफल प्रदर्शन – सहयोग पुर्‍याउने सबैमा चितवन सम्पर्क समिती को धन्बाद ज्ञापन
admin ३ आश्विन २०७६, शुक्रबार १९:४३ 22nd September 2019
कोरियाको १० वर्षे यात्राका सुख दुःख
admin १० फाल्गुन २०७५, शुक्रबार १३:४५ 26th February 2019